Fahasamihafana eo amin'ny Commensalism sy ny Parasitism | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny Commensalism sy ny Parasitism | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Fandraisana / Siansa & Natiora / Siansa / Biolojia / Fahasamihafana eo amin'ny Commensalism sy ny Parasitism
Fahasamihafana eo amin'ny Commensalism sy ny Parasitism
7 Jolay 2017 Narotsak'i Samanthi
Fahasamihafana lehibe - Commensalism vs Parasitism
Samy manana ny fomba ifandraisany amin'ny zavamiaina eo amin'ny tontolo iainana . Ny karazam-pifandraisana isan-karazany dia azo fantarina amin'ny karazana samy hafa. Ny fifandraisana sasany dia miteraka tombony ho an'ny andaniny roa ary ny fifandraisana sasany kosa mijanona ho tsy miandany tsy misy tombony na vokadratsin'ny vokany. Amin'ny fifandraisana hafa, ny antoko iray dia mahazo tombony amin'ny vidin'ny ankilany. Ireo karazam-pifandraisana ireo dia misy fiatraikany amin'ny fitoniana eo amin'ny tontolo iainana. Misy karazany telo lehibe amin'ny fifandraisana simbiotika antsoina hoe mutualisme , commensalism, ary parasitism. Amin'ny fiaraha-mientana dia samy mandray soa avy amin'ny fifangaroana ireo karazany roa ireo. Amin'ny commensalism dia karazany iray ihany no mahazo tombony raha tsy misy voa na voa. Ny parasitism dia fifanakalozana ifandraisana iray izay ahazoan'ny antoko iray tombony tombony amin'ny ankolafy hafa. Ny mahasamihafa azy lehibe eo amin'ny commensalism sy ny parasitism dia ny komunalisme dia mahazo tombony ny antoko iray , raha amin'ny parasitism kosa dia misy antoko iray iharan'ny herisetra tanteraka na amin'ny ampahany.
2. Inona no atao hoe Commensalism
3. Inona no atao hoe Parasitism
4. Ny fitoviana eo amin'ny Commensalism sy ny Parasitism
5. Fampitahana mifanila - Commensalism vs Parasitism amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe Commensalism?
Ny commensalism dia karazana fifangaroan-kevitra simbiotika eo amin'ny karazany roa izay tombony iray tombony raha ny karazany faharoa kosa tsy mahazo tombony na iharan-doza. Samy miara-miaina anaty fikambanana ny roa tonta. Ny tombontsoa azon'ny antoko iray dia ny sakafo mahavelona, ​​ny lokom-pahasalamana, ny fialofana, ny fanampiana, ny sisan-tsakafo, sns.
Ny vorompotsy miompy any an-tsaha miaraka amin'ny omby na biby fiompy hafa dia ohatra iray amin'ny commensalism. Ny biby toy ny omby, soavaly, zebra, sns. Ny vorompotsy, manaraka ireto biby fiompy ireto, dia misambotra sy mihinana ireo bibikely ireo. Eto no ahazoana tombony ny vorondolo fa ny biby lehibe kokoa dia sady tsy voaina no tsy mahazo tombony.
Sary 01: Ohatra amin'ny commensalism
Ny ohatra iray hafa amin'ny commensalism dia ny koka manaikitra sy parasy izay mamelona tsy misy vokany ny volom-borona.
Inona no atao hoe Parasitism?
Ny parasitism dia fifandraisana tsy ifandraisan'ny karazany roa, izay ahazoan'ny tombony iray tombony ny iray hafa. Ny antoko mahazo tombony amin'ny katsentsitra dia fantatra amin'ny hoe katsentsitra. Ny parasites dia ireo zavamananaina miaina na amin'ny zavamananaina hafa mba hahazoana otrikaina. Ny zavamananaina mpampiantrano matetika dia voakasiky ny katsentsitra. Ny parasites dia miteraka fahasimbana amin'ny fampiantranoana zavamiaina ary manelingelina ireo fiasa metabolika ihany koa. Ny katsentsitra dia miankina amin'ny mpampiantrano foana ny fahavelomany. Tsy afaka miaina tsy miankina.
Misy karazana katsentsitra roa lehibe: ny endoparasites sy ny ectoparasites. Ny ectoparasites dia miaina ivelan'ny vatan'ny mpampiantrano raha ny endoparasites kosa dia miaina ao anatin'ny vatana ny mpampiantrano.
Ny parasite koa dia mety miteraka aretina amin'ny olombelona. Misy kilasy lehibe telo amin'ny katsentsitra olombelona antsoina hoe protozoa, helminths ary ectoparasites. Entamoeba, Giardia , Leishmania , Plasmodium , ary Cryptosporidium dia protozoans maromaro izay parasitika amin'ny olombelona. Ny pararata sy ny kankana dia katsaka helminth roa.
Misy ihany koa ireo zavamaniry parasito izay maniry amin'ny zavamaniry iray hafa ary mahazo ny ampahany na ny ampahany amin'ny sakafo mahavelona avy amin'ilay zavamaniry mpampiantrano. Ireo zavamaniry parasite dia mamolavola rafitra manokana antsoina hoe haustoria hanatsofohana ireo vatan'ny mpampiantrano sy hahazoana otrikaina. Cuscuta dia zavamaniry parasite iray mahazatra.
Sary 02: zavamaniry parasito
Inona avy ireo fitoviana misy eo amin'ny Commensalism sy ny Parasitism?
Ny commensalism sy ny parasitism dia karazany roa amin'ny fifandraisana simbiotika.
Ireo fifandraisana roa ireo dia misy karazany roa izay miara-miaina.
Ireo karazana fifandraisana roa ireo dia zava-dehibe amin'ny fitoniana eo amin'ny tontolo iainana.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny Commensalism sy ny Parasitism?
Ny commensalism dia fifandraisana simbiotika izay misy tombony ho an'ny mpiara-miasa iray ary ny iray kosa tsy misy fiantraikany. Ny parasitism dia fifandraisana symbiotika izay ahazoan'ny mpiara-miombon'antoka tombony iray amin'ny fahazoana otrikaina amin'ny vola lanin'ny sakaizany iray hafa.
Ny ohatra sasany amin'ny commensalism dia misy barnacle amin'ny trozona, remora mifatotra amin'ny antsantsa, sns. Ohatra vitsivitsy amin'ny parasitisme dia misy Rafflesia, Cuscuta, Plasmodium vivax, sns.
Amin'ny commensalism, ny mpampiantrano dia tsy voadona na voa. Amin'ny katsentsitra, ny mpampiantrano dia voa amin'ny ampahany na tanteraka.
Famintinana - Commensalism vs Parasitism
Ny commensalism sy ny parasitism dia fifandraisana roa mifanohitra hita eo amin'ny zavamananaina. Ny commensalism dia fifandraisana misy eo amin'ny zavamananaina roa izay ahazoan'ny zavamanana iray tombony fa ny iray kosa tsy misy fiantraikany. Ny parasitism dia karazana fifandraisana misy eo amin'ny zavamananaina roa izay ahazoana tombony iray ny karazany iray raha ny iray kosa voa ratsy amin'ny ampahany na tanteraka. Io no mahasamihafa indrindra ny commensalism sy ny parasitism.
Sintomy ny PDF Version of Commensalism vs Parasitism
Azonao atao ny misintona ny kinova PDF an'ity lahatsoratra ity ary ampiasao izany ho an'ny tanjona ivelan'ny Internet toy ny isaky ny naoty. Azafady mba ampidino eto ny kinova PDF eto .
1. ” Commensalism. ” Wikipedia. Wikimedia Foundation, 08 June 2017. Web. Hita eto . 26 Jona 2017.
2. ”Fifandraisana Symbiotika: Fiaraha-mientana, Fifandraisana andraikitra ary Fahasamihafana.” Study.com. Study.com, nd Web. Hita eto. 26 Jona 2017.
1. "Lascar Ohatra iray amin'ny commensalism - Zebra sy egret (4524314329)" Nosoratan'i Jorge Láscar avy any Aostralia (CC BY 2.0) avy amin'ny Wikimedia Wikimedia
2. "Cuscuta parasite plant" Nosoratan'i Khalid Mahmood - Asa manokana (GFDL) via Commons Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny Symbiosis sy ny Mutualism Fahasamihafana eo amin'ny Predator sy ny Parasite Fahasamihafana eo amin'ny Parasitism sy ny Mutualism Fahasamihafana eo amin'ny fiaraha-mientana sy ny commensalism Fahasamihafana eo amin'ny Apomixis sy Parthenogenesis
Filed Under: Biolojia Tagged With: commensalism , Commensalism and Parasitism Differences , Commensalism Definition , Commensalism ohatra , Commensalism vs Parasitism , Compare Commensalism and Parasitism , parasitism , Parasitism Definition , Parasitism ohatra
Fahasamihafana eo amin'ny Verb sy Adverbe
Fahasamihafana eo amin'ny Gas MAPP sy Propane
Fahasamihafana eo amin'ny farany sy ny farany
Fahasamihafana eo amin'ny Amonia sy Cloudy Ammonia